Iyo ECB ichaisa mafambiro eEuropean misika yemasheya mu2019 | Ehupfumi Zvemari
Kanzuru inotonga yeEuropean Central Bank (ECB) yakafunga kuchengetedza mari yemitero isina kuchinjwa pamisangano yayo yekupedzisira. Mutumbi wakasarudzwa neItari Mario Draghi inoenderera mberi nehurongwa hwayo hwekutenga zvinhu, kunyangwe iine hushoma pane hwa2019. Iyi nhau yakanaka kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati vasingatarisiri kuti chokwadi ichi chichava nemhedzisiro yakawandisa pamisika ye equity yekondinendi yekare mu rino gore idzva ratange tiri mukurovedza muviri kwemazuva mashoma.
Chimwe chinhu chinonakidza kwazvo chinobuda kubva mukufarira kwebhanga reEuropean rekuburitsa ndicho icho chinoreva kukura muhupfumi hweMunharaunda. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti bhizimusi repakati rakadzokorora fungidziro dzekukura kweGDP yegore rino nechikamu chimwe chete mugumi, kunyanya chakadzikisa kubva 1,8% kusvika 1,7% uye inosiya iwo maonero akafanana e2020 pa1,7% kukura. Icho chiri, mune chero mamiriro ezvinhu, mutsauko mushoma uyo usingazove nekukanganisa kwakanyanya pamisika yemari. Kunyangwe zvisingazoshamise zvakanyanya kuti yakagadziridzwa mumwedzi iri kuuya.
Kune rimwe divi, uye mune izvo zvinoreva iyo inflation, ongororo yavo iri mutsinga yakafanana neiri pamusoro. Iko kunoratidzwa kuti ichakwira mumwedzi iri kuuya, ine fungidziro yepamutemo iri pakati pe1,7% kusvika 1,8%, nepo zvichipesana, inflation ye2020 ichawira ku1,6% kubva pa1,7%. Iwo zvakare haasi akanyanya kukosha margins ekufambisa misika yequity mune imwe nzira kana imwe. Dzimwe nguva hadzisi dhata dzino simbisa kukanganisa hunhu hwemisika yemasheya yekondinendi yekare. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
1 ECB: chimbadzo
2 Iine shanduko mumitemo yemari
3 Type simuka
4 Investment inorangwa
5 Zvigadzirwa zvekuchengetedza zvakabatsirwa
Chero zvazvingaitika, iyo European Central Bank (ECB) inosimbisa izvo zvegore rino razvino iyo zvinoshanda zvinofarira Iwo makuru emari mashandiro ezvemari anozofamba panguva iyoyo pasina musiyano kana zvirinani zvishoma, pamatanho e0,00%, 0,25% uye -0,40%, zvichiteerana kune imwe yenguva dzakaongororwa. Iko, kubva kumubatanidzwa wemari weEuropean zvinonongedzerwa kuti "njodzi dzakakomberedza tarisiro yekukura kwenzvimbo yeuro dzinogona kuongororwa seyakaenzana" Chinhu chinonyanya kupokana uye kuti mune iyi kesi chinogona kukanganisa misika yezvemari.
Mune imwe tsinga, zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti inosimbisa kuti "kushomeka mumisika iri kusimukira uye kusagadzikana mumisika yemari." Nekudaro iyi iri pfumo rakatenderedza kaviri sezvo chikamu chakanaka chevamiriri vezvemari vepasi rese vachisimbisa kuti ndiyo chaiyo misika yemakambani inogona kusimuka zvakanyanya mumwedzi gumi nemiviri inotevera kana kusvika pakapera gore rino ichangobuda. Hazvishamise kuti ine yakanyanya yepamusoro yekuongorora mikana kupfuura mune mamwe masheya indices munzvimbo yeEuropean.
Iine shanduko mumitemo yemari
Chero zvazvingaitika, chimwe chinhu chinofanirwa kutarisirwa kubva zvino zvichienda mberi ndicho mutemo wezvemari munzvimbo ye euro. Ndiwo marambiro akaita Mario Draghi paakayambira mumusangano uchangopfuura nevatori venhau kuti "zvakakosha kuchengetedza nzvimbo dzakasimba dzemari." Iyo yambiro yakajeka kune vafambisi vengarava vanofamba munyika inogara yakaoma mari uyezve iyo yekudyara. Nekuti mukuita, chichava chimwe chekuchinja kwazvino kuchazoitika munzvimbo ino yakakosha yenzvimbo.
Kune rimwe divi, rinofanira kutakurwa mupfungwa kuti segore rino razvino, zvizhinji zvichataurwa neEuropean Central Bank (ECB). Iko imwe yenyaya huru kuti inokwanisa kuitisa haina kana kushoma uye hapana chimwe kunze kwekutsiviwa kwemutungamiri wayo ane simba kupfuura panguva iyo Italian Mario Draghi. Zvese kuratidza kuti zororo rake rinobva kune vane simba Chikamu chebhengi cheGerman, kunyange hazvo shanduko zhinji mumutemo wezvemari dzakagadzirwa kusvika zvino dzisingatarisirwe. Nemisiyano mishoma kwazvo, sezvakataurwa nevakawanda vevanoongorora nezvehupfumi.
Chero zvazvingaitika, kana iri gore idzva richizosiyanisirwa chimwe chinhu, imhaka yekuti ichaenda munhoroondo segore rairi chimbadzo chakakwira. Kunyangwe zvakadaro, zvinotarisirwa kuti kusimba hakuzove kwakanyanya uye kuchaitika mukota yenzvimbo, inova iyo mari iyo misika yequity yekondinendi yekare iri kudzikisira. Mupfungwa iyi, chero chinhu chaive chakakwira kusimuka chaizonzwa asi chakashata kwazvo kune vanoita mari. Nekuderera kwekukwanisa kwemasheya akanyorwa pamusika weEuropean stock. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chechokwadi uye ndiwo mutengo wemari unenge usiri wakachipa sekusvika parizvino. Iyo inofanirwa kuyeukwa kuti iko zvino yave pa0%, zvinoreva kuti ndeimwe nhanho yezvakaitika kumashure uye kuti zvinoreva chaizvo kuti mari yacho haina kukodzera chero chinhu panguva ino. Kumuka kwekutanga kunotarisirwa yakaiswa pamatanho e0,25%, asi kwete zvimwe zvakawanda panguva ino. Kunyangwe chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya ndizvo zvichaitika mune yepakati nepakati refu. Nekuti zvinofungidzirwa kuti panogona kuve nekuwedzera zvinofambira mberi kudzamara zviremera zveEuropean Central Bank (ECB) zvasarudza.
Iyi sarudzo inoonekwa yemari neECB inozoremedza mashandiro evashambadzi vadiki nepakati. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti inogona kuburitsa rova mumisika yemari ye euro zone. Kwete zvisina maturo, imwe yematanho akataurwa neEuropean Central Bank chikamu-kunze kwemari inosimudzira mumisika yemari. Semhedzisiro yechiitiko chitsva mukondinendi yekare, hapana mubvunzo kuti kutengesa kumanikidza kuchakunda pakutenga kumanikidza pamusika wemasheya.
Zvese izvi zvakakosha zvinhu zvinogona kuita kuti zvive zvakanyanya kuomarara kune akachengetedzwa akachengetedzwa kubva zvino zvichienda mberi. Uye zvimwe zvakawanda kana mari dzeEurope dzakasunga iyo yakarebesa bullish steki mumakore achangopfuura, pasina kana mabhureki. Kusvikira muna 2018 misika yemasheya yakasiiwa mukukosha kwayo kupfuura gumi muzana zvine chekuita negore rapfuura. Chinhu chinogona kudzokororwa mugore rino chatangotanga mavhiki mashoma apfuura. Uye nekudaro, hakuzove nesarudzo kunze kwekuterera zvakanyanya kune akasiyana aya ayo musika wekutengesa ungavimba nawo mumwedzi iri kuuya.
Zvigadzirwa zvekuchengetedza zvakabatsirwa
Pane zvinopesana, vabatsiri vakakura veiri zano rezvemari mudunhu reyuro hapana mubvunzo kuti ndivo zvigadzirwa zvekuchengetedza (yakatarwa-temu bhangi dhipoziti, mabhangi ekuvimbisa manotsi uye epamusoro-mari maakaundi, pakati pezvimwe zvakakosha kwazvo). Hazvishamisi kuti ivo vanozoona yavo yekumisikidza margins akavandudzwa kuti vape zvinonakidza zvinodzoserwa pane zvakachengetwa pane kusvika zvino. Kwete pakukwirira kwakanyanya, asi zvirinani kuitira kuti chikamu chakanaka chekuchengetedza chega chive chinofarira mhando iyi yekuchengetedza mamodheru zvakare. Mupfungwa iyi, ivo vanokwanisa kupa kusvika ku2%, apo panguva yacho yaive yakaganhurirwa kune zvishoma pasi pe1%.
Kune rimwe divi, pane chinhu chakakosha kwazvo kusarudza zvigadzirwa zvekuchengetedza izvi nekuti vanovimbisa a yakatarwa uye yakavimbiswa kuita makore ose. Chero chii chinoitika mumisika yemari uye kunyangwe muzviitiko zvisina kunaka kwavari. Nguva dzose uine mamwe mazwi ekugara nekusingaperi uye kuti mune dzimwe nguva zvinoda kuti mari irege kufambiswa kwenguva yakawandisa. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvisina kunaka zvekuhaya zvimwe zvezvigadzirwa zvemari. Kunze kwekumwe kufunga kuchazoongororwa mune zvimwe zvinyorwa kuti unzwisise zvirinani zvese izvi pfungwa.
Sezvaungave iwe wakaona, chokwadi chekuti gore rino iwe unogona kuita mari pamusika wemasheya chinoenderana, neimwe nzira kana imwe, pamatanho ehupfumi akagadzirwa kubva kuEuropean Central Bank kubva zvino zvichienda mberi. Ese kuti ubatsirike iwe kana zvinopesana, kutora kusagadzikana nguva nenguva munzvimbo dzako mumisika yemari. Naizvozvo, isu tichafanirwa kuziva zvese zvainoita muna 2019 uye zvakare zvinotaurwa nenhengo dzayo dzakakodzera.
Hazvishamisi kuti isu hatigone kuvanza kuti tiri kusangana neshanduko mukutenderera mune yehupfumi kana yemusika wemusika modhi. Izvi, shure kwezvose, mamiriro ezvinhu akaunzwa nemisika yemari. Uye nenzira iyi, iwe unogona kusimudzira mashandiro ako uine hukuru vimbiso dzebudiriro. Mupfungwa iyi, ivo vanokwanisa kupa kusvika ku2%, apo panguva yacho yaive yakaganhurirwa kune zvishoma pasi pe1%.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » ECB ichaisa nhanho kumisika yeEuropean stock mu2019